वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ खर्चिए पनि पाल्पा – बुटवल सडकखण्डको अवस्था जस्ताको तस्तै , कहिले हुन्छ सुधार ? - samayapost.com
वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ खर्चिए पनि पाल्पा – बुटवल सडकखण्डको अवस्था जस्ताको तस्तै , कहिले हुन्छ सुधार ?
समयपोष्ट २०७४ असोज २१ गते ८:०९
पाल्पा बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नति हुन नसक्दा वर्षेनी यात्रु र गाडी चालकले ठुलो सास्ती खेप्नु परेको छ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यस सडकखण्डमा जोखिमपूर्ण रुपमा यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका छन्। उत्तर दक्षिण जोड्ने एकमात्र सडक सिद्धार्थ राजमार्ग भएर यहाँ दैनिक सयौँको संख्यामा सवारीसाधन गुड्ने गर्छन्।
सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारले वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ खर्चिदै आए पनि सडकको अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन। आजभन्दा झण्डै चार दशक अगाडि निर्माण भएको यस सडकमा करोडौँ रुपैयाँ सडक मर्मत तथा पुनःनिर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि खर्च भइसकेको छ।
पछिल्लो समय दिनानुदिन सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा पनि सडकको अवस्था बिग्रँदै गएको हो, सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर पवित्रमणी आचार्यले भने, सडक स्तरोन्नतिका लागि काम भइरहेको छ।
नारायणगढ मुग्लिङ सडकखण्डमा यातायात नियमित सुचारु नहुँदा पनि यसै सडकखण्डअन्तर्गत भएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका लागि दिनहुँ ठूलो संख्यामा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गर्दा पनि सडकको अवस्था निकै दयनीय बन्दै गएको छ। काठमाडौँसँग जोडिने वैकल्पिक मार्ग भएकाले पनि यसको स्तरोन्नति गर्नसके यात्रुले सहजरुपमा यात्रा गर्ने पाउने छन्। रासस